Liyahloma eBaqulusini lingahle lidle abantu – Bayede News
Izinsolo zokumiswa kweMeya zingahle zibe
IMeya uMnu uJerry Sibiya
Uma kuza isichotho kubonakala ngokuquka kwesimo sezulu abaziyo bese besho ukuthi lizoyithela. Kokunye ngokubuka isimo basho ukuthi lingahle lidume licekele phansi izinto. Yilesi sithombe esakhekayo kwipolitiki yaseBaqulusini. Ngalesi sikhathi ingxenye ethize ibilindele ukuthi kwenzeke okuthile kuloyo oyiMeneja kaMasipala uMnu uBonga Ntanzi umbani liwukhombe kuloyo oyiMeya uMnu uJerry Sibiya. Ozul’ azayithole sebengakuqinisekisa ukuthi lo mholi ubhale incwadi yesicelo sekhefu lezinsuku ezingama-30. Ngokuthola koZul’azayithole lesi sicelo esibe yisigubhukane singumphumela wempi engumshoshaphansi ethinta uSibiya, uSomlomo uMnu uMkhonyovu Khumalo, iMeneja uMnu uNtanzi kanye noMlawuli othunywe nguMnyango, uMnu uHlula Dladla.
Ngokomthombo uKhumalo noNtanzi bangasohlangothini olulodwa kanti uSibiya nomlawuli babekwa ngasohlangothini ngakolunye. Ukhuluma naleli phephandaba umthombo osondelene nalolu daba ubeke kanje: